Dr. Tint Swe's Writings: High demand ကြော်ငြာဆိုတာ သည်းခြေကြိုက်
High demand ကြော်ငြာဆိုတာ သည်းခြေကြိုက်
ဒီဆေးကို ဘယ်မှာဝယ်ရမလည်း မမေးပါနဲ့ချင်ဗျား။ အခုတလအတွင်း High Up-Calcium USA အရပ်ရှည်ဆေးကို မေးလို့ဖြေနေရတာ ၅ ယောက်လောက်ရှိပြီ။ ဆရာဝန်တွေ တကယ်သုံးတဲ့ဆေးမျိုးကို အဲလောက်မမေးကြပဲ ကြော်ငြာဆေးပဲမေးနေကြတယ်။ မေးခွန်းတွေထဲက နမူနာတခုပဲ ပေးပါမယ်။ ဒီမေးတဲ့သူက ပိုထူးခြားတယ်။
May 18th, 10:27pm
သုတ်လွှတ်မြန်တာကိုလည်းလျော့ချပေးနိုင်တယ်ကြားလို့ပါ သုတ်လွှတ် အရမ်းမြန်သူတစ်ယေက်အတွက် သောက်ဆေး Vimax ဆိုတာရော ဘယ်လိုဆေးမျိုးပါလဲဆရာ။ Vimax ဆေးရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို သိချင်တာပါတယ်ဆရာ။
May 18th, 10:55pm
Vimax ဆိုတဲ့ ကျားလိင်အင်္ဂါအတွက် (အွန်လိုင်း) ဆေးကြော်ငြာကိုဖတ်ရင် အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျားသာ တွေ့ရပါမယ်။ အမေရိကန် American Urological Association က ပြောခွင့်ရှိသူ Dr. Ira Sharlip ပြောတာကတော့ လိင်အင်္ဂါသန်မာဆေးဆိုတာမျိုး တကယ်မရှိပါ။ အမြတ်အစွန်းအတွက် ရောင်းနေကြာတာပါ။ သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေ ပြနိုင်တာမရှိပါ။ (ဝက်ဘ်ဆိုက်) ပိုင်ရှင်က ရောင်းရတဲ့အထဲက ကော်မရှင် ၅ဝ% ရတယ်။
May 19th, 12:16am
ဆရာ Vimax ဆေးကဆိုးကျိုးတွေရောရှိနိုင်သလားဆရာ။ ဝယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ပါ။
May 19th, 12:41pm
ဖြေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ဆေး မဟုတ်ပါ။ ထိရောက်မှု၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး သုတေသနမရှိပါ။ ထပ်သိလိုရင် ဆရာဝန်မဟုတ်သူကိုသာမေးပါ။ ဆောရီး။
May 26th, 9:45pm
ဆရာ Height Up Calcium Pills ဆိုတဲ့ အရပ်ရှည်ဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးတွေကို သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ သောက်သုံးရင် ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲဆရာ။
အဲတာကို အရင်လည်းဖြေရဘူးတယ်။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်၂၆ပါ။ အရပ်ပုပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာအရပ်ရှည်ဆေး ကြော်ငြာတွေ့လို့ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ တကယ်ပဲ ၂၆ ကျော်လဲရှည်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ၃ လ သောက်ရတယ် ပြောပါတယ်ဆရာ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိလားသိချင်ပါတယ်။ ဆရာအသက်ရှည် ကျန်းမာပါစေ။
အဲတာတွေအားလုံးက ကြော်ငြာဆေးဖြစ်တယ်။ ကယ်လ်စီယန်ကတော့ မသောက်သင့်သူစာရင်းထဲမပါရင် ကောင်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်း အသက် ၃ဝ-၃၅ ကျော်ရင် နေ့တိုင်းသောက်ရတယ်။ အရိုးပါး (အားနည်း) မှာကို ကာကွယ်ဖို့ပါ။ ကလေးငယ်တွေ အရိုးပျော့မရှိအောင် အချိန်အဆနဲ့ ပေးရတယ်။ လူ့အရပ်ဆိုတာ သူ့အရိုး တည်ဆောက်ထားမှုမှာ မူတည်တယ်။ အရိုးကို ပိုခိုင်အောင်သာ ဆေးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ ပိုရှည်စေဘို့ မရပါ။ လူတယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်ချိန်နောက်မှာ အရပ်ပိုမရှည်တော့ပါ။ စိတ်ပျက်မသွားပါနဲ့။ ဆက်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
လူတယောက်ရဲ့ အရပ်ကို မျိုးဗီဇနောက်ခံနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် အကြောင်းခံ တွေကနေ သက်ရောက်တယ်။ သိပ်ရှည်လွန်းတာကို Gigantism ခေါ်ပြီး၊ သိပ်ပုလွန်းရင် Dwarfism ခေါ်တယ်။ ဒီ ၂ မျိုးမဟုတ်သမျှ ပုံမှန်ချည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အရပ်ရှည်မှုဟာ အရိုးရှည်တွေ (ပေါင် + ခြေသလုံး) တွေက အဓိကဖြစ်တယ်။ ပေါင်ရိုးနဲ့ ခြေသလုံးရိုး။ ဒါတွေ ဆက် မရှည်တော့ချိန်မှာ ရပ်တန့်သွားတယ်။ Epiphyseal plates ဆိုတာ ပိတ်သွားချိန်မှာ ဆက်မရှည်တော့ဘူး။ အရိုးရှည်တွေ ထိပ်မှာရှိတဲ့ အဲဒီ အရိုးနုတွေက အရွယ်အလိုက် တဖြေးဖြေး မာလာပြီး အရိုးမာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ခြေထောက်ပိုင်းက လူ့အရပ်နဲ့ တဝက်လောက်ဆိုင်တယ်။ Ossification အရိုးမာတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အသက် အပိုင်းအခြားတွေ ရှိတယ်။ အရိုးစုတခုကြည့်ပြီး သူ့အရပ်ရော အသက်ပါ မှန်းလို့ရတယ်။
မိန်းကလေး ၅-၁၂ နှစ် နဲ့ ယောက်ျားလေး ၅-၁၄ နှစ်တွေမှာ အများဆုံးသော အရိုးတွေက Hard bone အရိုးမာတွေ ဖြစ်ကြပြီ။ ၁၇-၂ဝ နှစ်ရောက်ရင် လက် နဲ့ လက်ပြင်ရိုးတွေမှာဖြစ်ပြီ။ ၁၈-၂၃ နှစ်ရောက်ရင် ခြေထောက်ပိုင်း အရိုးတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပြီ။ ၂၃-၂၅ နှစ်မှာ ရင်ညွှန့်ရိုး၊ ညှပ်ရိုး နဲ့ ခါးရိုးတွေက ဖြစ်ကြပြီ။ အသက်အစိတ်မှာ အားလုံးပြည့်စုံသွားမယ်။ အသက် ၂၅ ကျော်ရင် မရှည်ချင်နဲ့တော့။
ဒိနောက်ပိုင်းမှာ နည်းနည်းရှည်လာနိုင်တာလဲရှိပါတယ်။ အသက်သိပ်ကြီးချိန်မှာတော့ ဆက်မရှည်တော့တာ သေခြာတယ်။ ကျောရိုးမကြီးက အရိုးတွေကြားက အရိုးနုလေးတွေအပေါ်မှာ မူတည်လို့ အဲလိုဖြစ်တယ်။ အားတက်စရာပြောရရင် ကြောရိုးမကြီးမှာ အရိုးပေါင်း ၃၃ ခုရှိပေမဲ့ ၂၄ ခုက တခုနဲ့တခု ဆက်မသွားကြဘဲနေရစ်တယ်။ ဒီအချက်ကို အရပ်ရှည်ဘို့ အသုံးချနိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကြောရိုးမကြီးဟာ လူ့အရပ်ရဲ့ ၃၅% နဲ့ဆိုင်တယ်။ ဒီအချက်ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အရပ်ရှည်ဘို့လုပ်တာကို ကောင်းတယ်လို့ အားပေးသူတွေက ဒီလိုလုပ်တာက ကြီးထွားစေတဲ့ဟော်မုန်းကို ထုတ်စေအောင်လုပ်ရာကျတယ်လို့ပါ ဆိုတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။
Stretching Exercises ထိရောက်တဲ့ အရပ်ရှည်လေ့ကျင့်ခန်း ၄ မျိုး
(၂) ယောဂ ဆန့်တန်းနည်း၊
(၃) ရေကူးနည်း နဲ့
သိပ်ဆင်းရဲတဲ့ အရပ်ဒေသတွေမှာ အာဟာရ ချို့တဲ့တာတွေကြောင့် အချိန်တွေကြာလာရင် လူတွေအများစုက အရပ်ပုမယ်။ ဒုတိယ-ကမ္ဘာစစ်ကာလ ဂျပန်တွေ အရပ်ပုကြတာ ဗမာတွေအသိဘဲ။ အခု မပုကြတော့တာ ဘာလို့လဲ။ ၂၅-၁၁-၂ဝဝ၂ ထုတ်သတင်းမှာ နွားနို့သောက်လို့ပါလို့ ပြောတာ ရှိတယ်။ လူငယ်တွေ နွားနို့သောက် များလာတာ ၁ဝ နှစ်အတွင်း အဆ ၅ဝဝ တောင်ရှိသတဲ့။ ပေါင်မုံ့လဲ အမျိုးစုံအောင် စားသတဲ့။ ဈေးချိုတဲ့ ဆန်ထက်တောင် ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ပေါင်မုံ့စားနှုန်းက ၁၁ ဆ တက်လာတယ်။ ကိတ်မုံ့စားတာလဲ ပိုများလာတယ်။ ဒါကြောင့် ၁ဝ နှစ်သမီးလေးတွေက သူတို့အမတွေထက် ၁ လက္မပိုရှည်လာကြတယ်။ အလေးချိန်လဲ ၁ ပေါင်တိုးလာကြတယ်။ ယောက်ျားလေး-မိန်းကလေးတွေက စစ်မဖြစ်ခင်ကထက် ၃ ပေါင်ပိုလေးပြီး လက္မဝက် ပိုရှည်လာကြတယ်။
အာဟာရပြည့်ဝဝ စားသုံးပါ။ ကျန်းမာနေစေရမယ်။ ကိုယ်လက်-လေ့ကျင့်ခန်း၊ ဆန့်တန်းမှုပါတဲ့ အားကစား ဥပမာ ရေကူး၊ တင်းနစ် ကစားပေးပါ။ ဘာတန်းကနေ အောက်တွဲလောင်းချနည်းလုပ်ပါ။ အနေအထိုင်ကအစ ပြင်ပါ။ ခါးမတ်မတ်ထိုင်၊ ခါးဆန့်လမ်းလျှောက်ပါ။ တနေ့ ၈ နာရီအိပ်စက်ပါ။ အရပ်ရှည်ချင်သူတွေ စားဘို့ကောင်းတဲ့ဆေးနဲ့ အစာမှာ ဗီတာမင် (ဒီ)၊ (ပရိုတင်း)၊ ဗီတာမင် (အေ)၊ (ကယ်လ်စီယန်) နဲ့ ဓါတ်ဆားတွေ ပါသင့်တယ်။
အရပ်ရှည်ဆေးတွေကြော်ညာပြီးရောင်းတာရှိပေမဲ့ ကျွန်တော်တော့ ထောက်ခံချက်မပေးနိုင်ပါ။ အမေရိကမှာ ခေတ်စားလာတော့ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှာ လေ့လာမှုဆောင်းပါးတခုရေးလာတာဖတ်ရပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ကြာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၁ မေလကတည်းကပါ။ အရိုးအတွက် ကယ်လ်စီယမ်ဆေးပေးရင် အရပ်ပိုရှည်သလားတဲ့။ အရိုးဆိုတာ အသက်ရလာလေလေ အိုမင်းပျက်စီးလေဆိုတာအမှန်ပါ။ အဲလိုဆိုရင် အရိုးအားကောင်းတဲ့ဆေးပေးပြီး အိုမင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်မယ်၊ ကုစားမယ်ဆိုတာ ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်တဲ့စဉ်းစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာမှ အရိုးအားနည်းလို့ တော်တော်တန်တန်ထိခိုက်မှုကြောင့် အရိုးကျိုးတာကိကနေ ကာကွယ်ရာကျမယ်လို့ ဆက်စဉ်းစားပါတယ်။ ပြောသလောက် ဟုတ်ပါရဲ့လား။
ဆွီဒင် (အူပန်ဆာလာ) တက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာ (အီဗာ) ကပြောပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ်သိပ်များသွားရင် ဆိုးကျိုးပေးတယ်တဲ့။ သူ့အဖွဲ့ကနေ ၁၉၁၄ ကနေ ၁၉၄၈ အတွင်းမှာမွေးဖွါးခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသမီးပေါင်း ၆ သောင်းကို လေ့လာပြီးမှ အဲလိုပြောတာပါ။ ၁၉ နှစ်ဆက်တိုက်လေ့လာမှုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ် 750 mg အောက် နည်းနည်းလေးသာရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ တနေ့မှာ ကယ်လ်စီယမ် 900 mg အထက်ရခဲ့သူတွေထက် ပထမ အရိုးကျိုးခြင်း ၁၈% ပိုဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် 1,140 mg အထိများများရသူတွေမှာ ပိုကောင်းတယ်လို့ မပြောပလောက်အောင်သာရကြတာတွေ့ရပါ။
လက်ရှိအမေရိကန်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်အရ အသက် ၅ဝ ကျော်အမျိုးသမီးတွေ တနေ့မှာ ကယ်လ်စီယမ် 1,200 mg ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာကများနေတယ်လို့ ဆွီဒင်ဆရာဝန်တွေက ထောက်ပြထားပါတယ်။ တချို့က အဲလောက်မလိုကြပဲ၊ တချို့အမျိုးသမီးတွေကပိုလိုကြပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာဆေးလိပ်သောက်သူတွေ။ ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှုလုပ်သူတွေက နည်းလိုမယ်။ ကယ်လ်စီယမ်ဟာ လိုတာထက်ပိုများရင် အရိုးတည်ဆောက်မှုမှာ အကျိုးမပေးပါ။ 700 mg ကနေ 800 mg က အသင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်။
၅-၁ဝ-၂ဝ၁၄ နေ့က ဆေးသိပ္ပံသတင်းတပုဒ်ထွက်တယ်။ ရှေးဟောင်းပုံပြင်၊ အရပ်ရှည်ခြင်းရဲ့မျိုးဗီဇတွေ့ရှိ။ ဆိုလိုတာက မျိုးဗီဇဖြစ်တယ်။ ကယ်လ်စီယမ်မဟုတ်ပါ။ တခြားဟာတွေလည်းမဟုတ်ပါ။
ဒီဆေးကို ဘယ်မှာဝယ်ရမလည်း မမေးပါနဲ့ချင်ဗျား။ စာရေးတဲ့ဆရာဝန် ကော်မရှင်မရပါ။
▼ 2015 (2277)
Our Testimonies အစစ်ခံချက်
HIV drugs should be given at diagnosis
Lung cancer therapy is milestone အဆုပ်ကင်ဆာကုသနည်း...
Half full or half empty ခွက်အပြည့်မဟုတ်ခြင်း
It’s just Politics ကနေ့နိုင်ငံရေး
Water ရေများ ကုသိုလ်လုပ်ပါတယ်
Storm မုန်တိုင်းဘေးက ဝေးပါစေ
Volunteering အခမဲ့စာအုပ် ကူလီထမ်းခြင်း
U.S.-Myanmar Engagement Conference
Stool pigeon ဖေါ်ကောင်
Dapayin guilty party ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း လုပ်ကြံခဲ့သ...
AsiaNews နဲ့ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ အမေးအဖြေ
Facts about blood donation သွေးလှူခြင်းကိန်းဂဏန်းများ
Pentagon says live anthrax inadvertently shipped a...
Excess caffeine health warning ကေဖင်းတာ မကောင်း
Mango tree ပါရမီရပ်
Timing ကာလံဒေသံ လျော်ကန်ပါစေ
G6PD and Blood groups နဲ့ သွေးအုပ်စု
G6PD Deficiency Support Group
G6PD Low-risk Drugs မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်နဲ့ ဆေး
Pregnancy starts ကိုယ်ဝန်စရှိတယ်ဆိုတာ
How to ask မေးခွန်းစည်းကမ်း
Drug Abuse writings
G6PD နဲ့ သွေးအုပ်စု
Royal visit နေပြည်သွား တောသား
Memorial Day အောက်မေ့ဖွယ်နေ့
Don't threaten me please ကျူရှင်ဆရာမများနှင့် ယောက...
A Leaf Out of History သမိုင်းစာမျက်နှာ
HIV infection stages HIV ကူးစက်ရောဂါအဆင့်များ
Common cleaning products can trigger asthma symptoms
Operation Register ခွဲစိတ်လူနာမှတ်တမ်းစာအုပ်
Scare ကျွန်တော့်ကို ကြောက်ကြတယ်
Stem cells can be safely infused in brain to promo...
Genius forasmile ပါရမီ
Facebook Surgeon ဆာဂျင်
China puts new lupus drug to clinical tests
Self-immolation မိမိကိုယ်ကို မီးရှို့ဆန္ဒပြခြင်း
Asia Skin Products အာရှအမျိုးသမီးတွေအတွက် အမေရိကန်...
Infrared (IR) light အနီအောက်ရောင်ခြည်
Goodbye Surgery ခွဲတော့ခွဲပါတယ်
Farewell to Surgery ခွဲဆရာဝန်
Female Orgasm (2) အမျိုးသမီးပြီးခြင်း (၂)
Female orgasm (1) အမျိုးသမီး ပြီးခြင်း (၁)
Cancer study pinpoints 8 signs death is nigh
Blessed Flowers ကံကောင်းတဲ့ပန်း
Things get worse as get older ကြီးမိုက်
Changes for the worse ပြင်တာတဲ့လား
Treatment of HCV Genotypes အသည်းရောင် (စီ) ဂျီနိုအ...
The Sidney Morning Herald failed to follow media e...
Shock treatment ရှော့ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုကုမလည်း
Killing Field (2) မြန်မာစာ သတ်ကွင်း (၂)
Ocean of books ကံကောင်းကြသူများ
A popular word သဝေထိုး မရေးချ ငသတ်
What if သူများယောင်လို့
Killing Field မြန်မာစာ သတ်ကွင်း
The CIA is dropping Burmese bombs on China
Duty Free မြန်မာပြည်ကနေ သယ်လာပေးပါ
Dr. Norman Bethune ဒေါက်တာနော်မန်ဗက်သွန်း
Secrets to healthy hair ဆံပင်ကျန်းမာရေး
Plato ပလေတိုပြောတဲ့ ပလီစိချောက်ချက်
Ca Liver အသည်းကင်ဆာ အမေး-အဖြေ
New Imaging Method Detects Liver Cancer
Water hyacinth ဗေဒါပင်
Pharmaceutical groups punished for misleading ads
Anorectal diseases စအို-အစာဟောင်းအိမ် ရောဂါများ
Religion for Vote မဲပေးရေးနဲ့ ဘာသာရေး
Voice lifts အရင်ကလို အသံကောင်းချင်သလား
Jungle flowers တောပန်း
Beanstalk and I ပဲပင်စိုက်ထားတယ်
Docetaxel ယောက်ျားဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆေး အသက်ပိုရှည်စေနိုင်
Relative truth သစ္စာမဟုတ်
Transfusion-associated graft-versus-host disease အ...
Breast biting baby ကလေးနို့ကိုက်ခြင်း
Eight surprising consequences of Ghana's power out...
List of dictators အာဏာရှင်စာရင်း
The visitors လေ့လာရေးကိုလေ့လာခြင်း
Mother’s words of wisdom အမေ့စကား
Potato chips ဇာတိဇစ်မြစ်မချစ် အာလူးချစ်
Anxiety Disorders စိုးရိမ်စိတ်ကဲလွန်ခြင်း
စစ်တပ်နဲ့ NLD ကွာခြားချက်
Vaccinating against cervical cancer သားအိမ်ဝကင်ဆာက...
The joy of being incomplete မပြည့်စုံပေမယ့်ဖြေရပါတယ်
Water Please ရေလှူကြပါဗျာ
ASD (2) နှလုံးအပေါက် (၂)
ASD (1) နှလုံးအပေါက် (၁)
Hepatitis C အသည်းရောင် (စီ) ဆိုတာ
Hepatitis B treatment guideline အသည်းရောင် (ဘီ) ကု...